२१ खेलाडीको दुई वर्षको तलब आइसिसीले पठायो,कसलाई कति ? – Laliguransnews
सन्दीप लामिछानेले ४ ओभरमा १० रन खर्चिएर ४ विकेट लिए
दुर्घटनास्थलमा प्रहरी पुग्यो, जलेको अवस्थामा ७ वटा शव
डिपिएल- ३ को उपाधि सिवाइसी अत्तरियालाई
मेलबर्न स्टार्स उपविजेतामा सिमित, सन्दीपको किफायती बलिङ
सिक्सर्सलाई फराकिलो अन्तरमा हराउँदै मेलबर्न सेमिफाइनलमा, सन्दीपले लिए ३ विकेट
२१ खेलाडीको दुई वर्षको तलब आइसिसीले पठायो,कसलाई कति ?
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता, युएईविरूद्धको टी ट्वान्टी सिरिज जित्यो
नेपालद्वारा युएई ४ विकेटले पराजित, दीपेन्द्र र पवन बने नायक
टी–२० शृङ्खला : नेपाल युएइसँग २१ रनले पराजित
नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता, युएईविरूद्धको सिरिज २-१ ले जित्यो
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले नेपाली खेलाडीको रोकिएको दुई वर्षको तलब एकमुष्ट पठाएको छ।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) निलम्बनमा परेसँगै नेपाली खेलाडीले दुई वर्षदेखिको तलब पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)को पहलमा आइसिसीले दुई वर्षको खेलाडीको तलब एकमुष्ट रु एक करोड २७ लाख ८७ हजार ७८२ पठाएको राखेपले जनाएको छ।
‘हामीले आइसिसीबाट तलब पाउँदै आएका २१ खेलाडीसँग सम्झौता गरेर आइसिसीमा पठाएका थियौं। हिजो मात्र पैसा आएको छ’ राखेप सदस्य सचिव केशव विष्टले भने।
सन् २०१७ र १८ मा नेपालका लागि खेलेका क्रिकेटरलाई ए, बी र सी गरी तीन श्रेणीमा राखिएको छ। त्यसअनुसार राखेपले प्रत्येक खेलाडीहरूसँग सम्झौता गरेर तलबका लागि आइसिसीमा पत्र पठाएको थियो। आइसिसीले ‘ए’ श्रेणीका लागि मासिक रु ३५ हजार, ‘बी’ श्रेणीका लागि रु २५ हजार र सी श्रेष्णीका खेलाडीलाई रु १५ हजार मासिक तलब उपलब्ध गराएको छ ।
‘ए’ श्रेणीमा कप्तान पारस खड्कासँगै उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने छन्। दुई वर्षको तलब एकमुष्ट लिँदा ‘ए’ श्रेणीमा पर्ने खेलाडीले जनही रु आठ लाख ४० हजार पाउनेछन्।
त्यसैगरी श्रेणी ‘बी’ मा आरिफ शेख, करण केसी, ललित भण्डारी, अनिलकुमार साह, रोहित पौडेल, ललित राजवंशी र शक्ति गौचन छन् । उनीहरुले दुई वर्षको एकमुष्ट रु छ लाख पाउनेछन् ।
यसैगरी सी श्रेणीमा सुवास खकुरेल, सागर पुन, दिलीप नाथ, सुनिल धमला, सुसन भारी, प्रदीप ऐरी र विनोद भण्डारी छन् । उनीहरूले मासिक रु १५ हजारका दरले दुई वर्षको तलब रु तीन लाख पाउनेछन् ।
राखेपका अनुसार टोली व्यवस्थापक रमन शिवाकोटी र मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि दुई वर्षको पारिश्रमिक पाउनेछन्। उनीहरूको पारिश्रमिक खुलाइएको छैन।
क्यान विवादले उग्ररूप लिँदै गर्दा आइसिसीले २०७३ वैशाखदेखि क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। विसं २०७३ वैशाखमा क्यान निलम्बन भएपछि अहिलेसम्म नेपाली खेलाडीले अभिभावकबिनै ठूला प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
कीर्तिमानी धावक बोल्टले अष्ट्रेलियन क्लबबाट फुटबल खेल्ने!
सन्दीप लामिछानेले अफगान प्रिमियर लिग खेल्ने
यु १९ एसिया कप : नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो
पानामामाथि गोल वर्षा गर्दै इङ्ल्याण्ड नकआउट चरणमा,ह्यारी केनको ह्याट्रिक
विश्वकपमा ब्राजिलले नयाँ कीर्तिमान बनायो
टी ट्वान्टी विश्व कप छनोट : म्यानमारमाथि नेपालको शानदार जित
आयोजक रसियालाई टाइब्रेकरमा ४-३ ले हराउदै क्रोएशिया सेमिफाइनलमा
नेपालको लगातार चौथो जित, थाइल्याण्डलाई ९ विकेटले हराउँदै समूह विजेता
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोलाई रेड कार्ड
भैरहवालाई हराउँदै ललितपुरले जित्यो इपिएलको उपाधि
© 2019 Laliguransnews - WordPress Theme : by Sparkle Themes